रमेश खरेलद्वारा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) बाट राजीनामा – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौं । रमेश खरेलले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) बाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
महानिरीक्षक नियुक्तिमा असन्तुष्ट खरेलले ‘अपमानित’ भएर काम नगर्ने भन्दै आज प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा राजीनामा बुझाएको प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले जनाउनु भएको हो ।
सरकारले हिजो बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाललाई २६ औं महानिरीक्षकमा पदन्नोती गरेको थियो । महानिरीक्षक बन्ने उद्देश्यअनुसार प्रहरी सेवामा लागे पनि सरकारले ‘अन्याय’ गरेपछि राजीनामा दिएको खरेलले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
२०४५ सालमा भलिबल खेलाडीको रुपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका खरेल एसएसपीसम्म पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दोस्रो बरियतामा राखेर डिआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।
महानिरीक्षकमा पदनोन्ती भएका खनालले राजीनामा नगर्न आग्रह गरेपनि खरेलले प्रहरी सेवा त्याग्नु भएको हो । २५ औं महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै अघिल्लो बर्ष पनि डिआइजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका थिए । न्युज२४नेपालमा खबर छ |
Prevएकै दिन घट्यो सुनको भाउ यति धेरै…
Nextभुटेको लसुन खाँदा हुने आश्चार्य जनक यस्ता फाइदाहरु ! जनिरखौ …
रातपरेपछि ठेलामा मःमः बेच्ने गायक, गाय अतिमिठो गीत ।नेपाल आईडलमा भाग लिन किन गएनन् त ? (भिडियो हेर्नुहोस )
भाइरल ६१ बर्षे बुलेट आमाको बुलेट दुर्घटना ? कलँकीमा २०० किलोको बुलेटले माथिबाट थिच्दा यस्तो भयो -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
अशोक दर्जीको दोस्रो झिलमा फुलुको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित )
ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै जाग्यो चीन, निर्धारित समयमै नेपालमा रेल ल्याउन नेपाली इन्जिनियरहरुलाई दिन थाल्यो तालिम